आले अभिव्यक्ति : पर्दैन मन्त्री पदमा फरक ? (भिडियो रिपोर्टसहित) - Himalaya Television
आले अभिव्यक्ति : पर्दैन मन्त्री पदमा फरक ? (भिडियो रिपोर्टसहित)
२०७९ असार ३ गते २१:२६
३ असार २०७९ सुर्खेत । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेम आले पुनः विवादमा तानिनुभएको छ । पटकपटक विवादित बन्ने मन्त्री आले यसपटक भने नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई अश्लिल शव्द प्रयोग गर्दै धम्काएका कारण विवादमा मुछिनुभएको हो । पटकपटक आलोचित हुने मन्त्री आलेको मन्त्रीपदमा फरक परेकै छैन !
यो कुनै सामान्य मानिसको आवाज होइन, यो त संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेले नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई गर्नुभएको गाली हो । एउटा जिम्मेवार मन्त्रीले अर्को जिम्मेवार अधिकारीलाई गरेको यस्तो गालीले के सन्देश देला ? अर्थात मन्त्रीलाई दिइने सम्मानको कदर हुन्छ त ?
नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष अधिकारीलाई गालीगलौज मात्र होइन, हात–पात नै गरेको सार्वजनिक भएको अडियोमा सुन्न सकिन्छ ।
मन्त्री आलेको यस्तो तल्लोस्तरको गाली पहिलोपटक सार्वजनिक भएको होइन । यो त पछिल्लो संस्करण मात्र हो । यसअघि पनि मन्त्री आले पटक–पटक विवादमा तानिनुभएको छ । गत फागुन ३ गते उहाँले अछाम घर भइ भारतको मुम्बई बस्ने जगत ओलीलाई गाली–गलौज गर्दै धम्क्याएको फोन वार्ता सार्वजनिक भएको थियो ।
यी त भए मन्त्री आलेका केही नमिठो शब्दवाणी । त्यति मात्र होइन, आलेले त नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीलाई त सार्वजनिकरुपमै गाली बेइज्जती गर्नुएको थियो । रेग्मीको कमजोरी भए कानूनी प्रक्रियाबाटै कारवाही गर्न सकिन्थ्यो, मन नपरेको भन्दैमा गाली गलौजमै उत्रिंदा मन्त्रीज्यूको हैसियत कहाँ पुग्छ ? त्यतिपनि ख्याल गरेको देखिएन । आले यतिमा मात्र चर्चाको पात्र बन्नुभएको छैन । उहाँ त आफ्नै पार्टी महासचिवलाई चिप्ले–चोर जस्ता शब्द प्रयोग गर्न पछि पर्नुभएन ।
यी त केही प्रतिनिधि घटना हुन् । मन्त्रीज्यूको हावादारी अभिव्यक्तिको त श्रृंखला नै छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेर कूसंस्कृतिको झलक देखाउँदा अहिले मन्त्री आले चर्चाको पात्र बन्नुभएको छ । मन्त्री आलेको शैलीलाई जानकार के भन्छन त ? हामीले पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराजलाई सोध्यौं । उहाँले त पार्टी नेतृत्वलाई नै प्रश्न उठाउनुभयो ।
राजनीतिक विश्लेषकको पनि मत अहिराजको भन्दा फरक छैन । आलेको पटक–पटकको व्यवहारले गुण्डाशैली झल्काएको राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवनको तर्क छ । वायुसेवा निगमका अधिकारीलाई गरेको दुर्व्यवहार फौजदारी मुद्दा आकर्षित हुने जीवनको भनाइ छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री आले पटकपटक विवादमा तानिदासमेत न उहाँ सम्बद्ध पार्टीले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छ न त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट नै कुनै टिप्पणी आएको छ । यसले समग्र प्रणालीमै नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ ।
मलमूत्र खुवाएको आरोपमा दुई महिला पक्राउ
कोटेश्वरमा माइक्रोबसको ठक्करबाट एकको मृत्यु, एक घाइते
चट्याङ लागेर कञ्चनपुरमा दुई जनाको मृत्यु
देशभर मनसुनी वायु सक्रिय, बिहीबारसम्म वर्षाको सम्भावना
एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय परिषद् बैठक आज पनि बस्दै
सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने जसपाको यादव पक्षको निर्णय
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई जोड्ने दोस्रो पक्की पुल सञ्चालनमा (भिडियो रिपोर्टसहित)
एकीकृत समाजवादीभित्रको विवाद उत्कर्षमा, रहला त सग्लो ? (भिडियो रिपोर्टसहित